မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
/ကုန်သွယ်ရေး နှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ
ကုန်သွယ်ရေး နှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း
ဖျော်ဖြေရေး၊ ပွဲအခမ်းအနားများနှင့် အားကစား လုပ်ငန်း
လက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း
မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ
အလုပ် 27 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
Administrative and HR Manager
MMK 2,000,000 - 2,500,000
Manager (Forex Management and Sale)
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ကုန်သွယ်ရေး နှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ
Chinese Translator (3) Posts
Must be good in translation from Myanmar to Chinese and any graduate or 10 standard.
Import Officer – Male Only (1) Post- Yangon (Pazontaung)
2 years experience in related field.
Must be good in translation from Myanmar to Chinese and any graduated or 10 standard
General Manager (Air con Industry) LG Brand
General Manager / Air Con Industry / LG /
HiQ International Trading Co.,Ltd
MMK 5,000,000 - 6,000,000
-Age 25- 35 years -Any graduate -Must have (5) Years experience in Sales & Marketing field -Must have (2) Years experience in Supervisor role
-Age 25- 35 years -Any graduate -Must have (5) Years experience in Sales & Marketing field ...
Sales Executive - Yangon (Generator, ATS, Cleaning Equipment & Heavy Equipment)
Must have good customer Relationship. Must have good sales achievement in past.
Service Technician (Generator)
To have knowledge for OEM recommended operational procedures and Troubleshooting steps for repairing and re-commissioning of power equipment and related control systems. To coordinate with Service/Parts Admin after receiving approval of the quotation.
To have knowledge for OEM recommended operational procedures and Troubleshooting steps for repai ...
Senior Sales Executive-Mandalay (Generator, Power Equipment, Heavy Machinery)
Must have good customer Relationship. Must have good sales achievement in the past.
Financial/ FX Market Analyst
Money Market Officer
Management Associate (Fund Management)
Management Associate (Treasury)
Operation Executive (Warehousing)
Experience in Tower Project isamust
Office Staff Male or Female (5) Posts
Myanmar Padauk Co.,Ltd.
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။